I-Yext: Insiza Yendawo Eyodwa Yokuzibusa Zonke | Martech Zone
I-Yext: Insiza Yendawo Eyodwa Yokuzibusa Zonke
NgoLwesithathu, Juni 20, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Uma uke wazama ukubhalisa ibhizinisi lakho nenqwaba yamasayithi wendawo laphaya, kuyisikhathi esikhulu-sokuncela. Akugcini nje ukuthi wonke amasayithi anendlela yokubhalisa ehlukile, onke ayakuphazamisa futhi akufaka kuhlu lwe-upsell. Sibhalise neYext namuhla futhi sayikhokhela iphakethe layo lePowerListings. Ngaphansi kwama- $ 50 ngenyanga, ikuvumela ukuthi uphathe amasayithi wokufakwa kuhlu angaphezulu kwama-30 konke kusuka kusiteji esiphakathi.
Nasi isikrini sokuphatha esihlinzeka ngemininingwane yakho yohlu:
Njengoba umthombo ngamunye unedathabheyisi yayo, kunama-100s wemininingwane yolwazi lwendawo laphaya. Kepha inkinga ukuthi, banqanyuliwe ngokuphelele, futhi noma nini lapho idatha iguquka, basheshe baphume ekuvumelaniseni. Eqinisweni, ngokwesilinganiso, ukufakwa kuhlu okungu-6% kushintsha inyanga ngayinye, futhi umphumela wokugcina ukuthi ngaphezu kwe-20% yosesho lwasendaweni lubuyisa imininingwane engaphelele ekugcineni kwabasebenzisi. Umphumela wokugcina uyakhathaza kakhulu amabhizinisi nabasebenzisi… I-Yext PowerListings ixazulula le nkinga enkulu ngokufaka phakathi imiphumela yosesho lwasendaweni kuwo wonke lawo masayithi ahlukene anohlelo olulodwa.
Nasi isikrini sokusesha lapho ungasesha ukuthola nokuxhuma uhlu lwakho lwendawo nesayithi ngalinye:
Kungakapheli nemizuzu, uhlu lwethu belusebenza kumasayithi ambalwa futhi sithola izaziso ze-imeyili njengoba abanye beba bukhoma. Yize singalindeli ukuba nozamcolo omkhulu webhizinisi njenge-ejensi ngokusesha kwasendaweni, kusabalulekile ukuthi ibhizinisi lethu lifakwe kuhlu ngokunembile futhi litholakale kuwo wonke lawa masayithi. Ikakhulu ngokukhula okuhle kwezinsizakalo ezisuselwa endaweni kumadivayisi eselula. Sifuna ukutholakala endaweni njengakuleli nakwamanye amazwe. Uma uyibhizinisi lokuthengisa, kubalulekile!
I-interface ilula ukuyisebenzisa, futhi ivumela izinkampani ezinendawo eziningi ukuphatha izindawo zazo kufayela le- Enterprise inguqulo. Thatha uvivinyo lwe-Yext by useshela ibhizinisi lakho kumasayithi wendawo. Siyabonga kubangani bethu ku EverEffect ukuthola!
Tags: wendawouhlu lwasendaweniUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethi
I-Offerpop: Ukuphathwa Kwemikhankaso Yomphakathi Yokuqeda
Jun 20, 2012 ku-7: 04 PM
Hlobo luni lwemiphumela osuyitholile kuze kube manje?
Jun 20, 2012 ku-9: 15 PM
Akukabi amahora angama-24 okwamanje, kepha amasevisi endawo angama-21 kwangu-35 abhalisiwe, avuselelwa, futhi ashicilelwa.
Jun 25, 2012 ku-3: 07 PM
Hhayi shabby kakhulu! For Siyabonga ngokwabelana.
Jun 21, 2012 ku-5: 53 PM
Izinsizakalo zendawo eyi-Day 2 ne-24 zibhalisiwe, zavuselelwa futhi zashicilelwa.
UJun 22, 2012 ngo-10: 04 AM
Namuhla ekuseni, ngithole inothi lokuthi i-SuperPages ishicilelwe. Lokho kungenye yezinto ezibalulekile ebengifuna ukuzibona zibuyekezwa!